Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey - Hargeele - Wararka Somali State
(Manchester) 28 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Burnley ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey.
Kooxda Manchester City ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Burnley si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Manchester City iyo Burnley horyaalka Premier League dalka England.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta XFS oo kulan la qaatay Agaasime waaxeedyada Wasaaradda+Sawirro
Muxuu ka yiri Frenkie de Jong mustaqbalka Lionel Messi??
Muxuu Pirlo ka yiri kulanka ay Inter Milan ku wada ciyaari doonaan semi-finalka Coppa Italia??